စစ်တမ်း - စုဆောင်းခြင်း၊ | Martech Zone
စစ်တမ်း - စုဆောင်းခြင်း၊
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 1, 2013 တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 31, 2013 Jenn Lisak Golding
စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဖတ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်စျေးကွက်များသို့ရည်ရွယ်သည့်အပတ်စဉ် (သို့မဟုတ်နေ့စဉ်ပင်) အခြေခံအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဒင်္ဂါး၏တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့နှင့် (ခွင့်ပြုချက်ကို အခြေခံ၍) စကားလက်ဆုံပြောဆိုနိုင်ရန်၎င်းတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုအပေါ်မှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း၎င်းတို့သည် whitepapers သို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများကိုရယူရန် landing စာမျက်နှာပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ရန်လိုသည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်သူတို့မည်သူမည်ဝါ၊ မည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားများကိုသူတို့ရရှိရန်စုဆောင်းနိုင်သည်။ ။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, ငါတို့ကပြောင်းလဲမှုသို့ပြောင်းလဲပစ်ရန်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆက်ဆံရေးကိုပြုစုပျိုးထောင်၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်ငါတို့၏အလားအလာများနှင့်အဆက်အသွယ်တစ်အချက်စတင်။
အွန်လိုင်းအလားအလာများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်စကားပြောဆိုခြင်းသည်အလွန်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်“ အော်ဂဲနစ်” ဆက်ဆံရေးကိုစတင်နိုင်သည်။ အလားအလာသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းရှိ၊ မရှိကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်သည်အကြောင်းအရာကိုတက်ကြွစွာမြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးပေးခြင်းများပြုလုပ်နေသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများပေါ်တက်လှမ်းရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖန်တီးပေးသည်။ ဤအလားအလာများကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲပြီးပိုကြာနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူတို့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
ဒါပေမယ့်လည်းငါတို့က“ နူးညံ့သော” ဦး ဆောင်မှုများကိုဖမ်းယူချင်တယ်၊ ဒါမှငါတို့ site ကိုသူတို့လာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ငါတို့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့အခြားနည်းလမ်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါအလားအလာရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခြေရာခံနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့ landing စာမျက်နှာတွေကိုပုံစံတွေနဲ့ဖန်တီးခဲ့တယ်၊ ဒါမှငါတို့ရဲ့အလားအလာနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုထပ်ပြီးဖမ်းယူပြီးငါတို့ပြုစုပျိုးထောင်ရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေနဲ့သူတို့ဆီကိုချဉ်းကပ်လာတယ်။ ၎င်းတို့သည်မည်မျှစိတ်ဝင်စားကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာများကိုစိတ်ဝင်စားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသည်။
ဒီတော့ဒီဟာကပိုပြီးအရေးကြီးတာက ဒေတာစုဆောင်းသို့မဟုတ်ဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံ? သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? ဟုတ်ပါတယ်, နှစ် ဦး စလုံးဟာစျေးကွက်ရှုထောင့်ကနေအရေးကြီးပေမယ့်ဘယ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကမင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုပြောင်းလဲဖို့ကူညီပေးသလဲ။
အတွက်အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရွေးပါ အွန်လိုင်းစစ်တမ်း ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာစပွန်ဆာမှအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။မင် ။ ၎င်းတို့သည်အွန်လိုင်းပုံစံတည်ဆောက်သူ၊ ဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာများနှင့်အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများပါသည့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည် analytics Mailchimp, PayPal, Google docs စသဖြင့်ဆော့ဝဲလ်နှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်း။
သင်ဘာထင်သလဲပြောပြပြီး ၂ ပတ်အတွင်းရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရေးပါမည်။ အောက်ဖော်ပြပါသင်၏မှတ်ချက်များကိုဝေမျှရန်အခမဲ့ပါ။
Jenn Lisak Golding သည် Sapphire Strategy ၏ဥက္ကPresident္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။ B2B အမှတ်တံဆိပ်သည်ဖောက်သည်များပိုမိုရရှိစေရန်နှင့်သူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI ကိုများပြားစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွေ့အကြုံရှိအတွေ့အကြုံများနှင့်ကြွယ်ဝသောအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်ထားသောဒီဂျစ်တယ်အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆုရရှိထားသောဗျူဟာပညာရှင်ဂျဲန်သည် Sapphire Lifecycle Model - သက်သေအထောက်အထားများကိုအခြေခံသည့်စာရင်းစစ်ကိရိယာနှင့်အဆင့်မြင့်မားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
Mindmapping 101: Mindmapping နိယာမများ